Puerto Aventuras, Quintana Roo, i-Mexico
Ukwamukela izivakashi, ngabakwa-
Amakhaya ekhethelo anakho konke kwezinkanyezi ezingu-5
Alinasici futhi lakhiwe ngobuchwepheshe, ikhaya ngalinye le-Airbnb Luxe liza namasevisi okunethezeka, izinsiza nomhleli wohambo ozinikele.
Ngemva kokubhukha leli khaya, umhleli wohambo angalungiselela noma yiziphi zalezi zengezo zamasevisi.
Ukuthuthwa kusuka esikhungweni zezindiza
Ukudla okushaya khona
Umsizi wendawo yokudlela
Indawo yokudlela yabantu abangu- 10
Indawo yokubhukuda (infinity pool)
Indawo encane ehlinzeka ngeziphuzo ezidakayo
Insimbi yokosa inyama
Indawo yokudlela isidlo sasekuseni
Umehluko we-Airbnb Luxe
Ukuhlelela uhambo kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni
Abahleli bohambo bahlela ukufika kwakho, ukusuka, nakho konke okunye.
Ukuhlolwa nokuhlaziywa kwamaphoyinti angu-300
Lonke ikhaya le-Airbnb Luxe liqinisekiswe mathupha ukuthi libe sesimweni esivelele.
Usizo lwephrimiyamu, olutholakalayo uma ludingeka kunoma imuphi umbuzo.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R18948.